ကျွန်ုပ်တို့၏စပါးဆန်စက်ကိုအဖြူရောင်ဆန်နှင့်ဆန်စပါးတို့ကိုခွဲခြားရန်အသုံးပြုသည်။ ဤစပါးဆန်စက်သည်မှုတ်တံနှင့်စုပ်ခွံကိုပိုက်လိုင်းမှတစ်ဆင့်မှုတ်ထုတ်နိုင်သည့်မှုတ်တံနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ စပါးဆန်စက်ကိုစပါးသီးခြားအတွက်ထုတ်လုပ်သည်။ သိပ်သည်းဆနိယာမအပေါ်အညိုရောင်ဆန်နှင့်စပါးကနေ. ဒီစပါးကြိတ်စက်ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ရန်အခြားဆန်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိရိယာများတပ်ဆင်ထားနိုင်သည် ဆန်စက်စက်ရုံ,အပြောင်းအလဲနဲ့ပြီးနောက် ,ဆန်ထဲမှာကွဲကွာနိုင်ပါတယ်2အမျိုးအစား ,ဆန်ဖြူနှင့်အညိုရောင်ခွံ။ ဒီအလိုအလျှောက်စပါးကြိတ်ခွဲစက်ကိရိယာများကိုရော်ဘာအမျိုးမျိုး၏အမြန်နှုန်းဖြင့်စီးရီးစပါးခွံများကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဆန်စပါးကိုဆန်ဖြူသို့ပြောင်းနိုင်သည်. ရော်ဘာအတုံးနှင့်သံတွန်းစက်ပါသောစပါးဆန်စက်စက်။ ရော်ဘာကြိတ်စက်သည်ဆန်အညိုရောင်ခွံကိုဖယ်ရှားနိုင်သည် ,နှင့်အခွံနှင့်အဖြူဆန်မှသံ roller.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်စက်တွင်ထူးခြားသောအစာကျွေးခြင်းနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုသည်,နှင့်ကြိတ်ခွဲအစိတ်အပိုင်းများကိုရော်ဘာ roller.it ဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်တိုးတက်စေနိုင်သည်
စမ်းသပ်ပြီးနောက် ,ရာဘာ roller သည်ဆန်၏ကျိုးနှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်
3.Long ကဝန်ဆောင်မှု lifer ဓားပြ roller
ဆန်စက်၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်နှစ်ဆ roller အပြောင်းအလဲစနစ်
အခွံနှင့်အဖြူရောင်ဆန်သောအညိုရောင်အသားအရေနှင့်သံကြိတ်စက်,တ ဦး တည်းဖြတ်သန်းဆန်စက်.
ဆန်စက်ထဲသို့ဆန်အစာကျွေးခြင်းဖြင့်ရော်ဘာ roller ကို ဖြတ်၍ သံ roller သို့သွားသည်။ ဆန်နှင့်ဖွဲ
VTSB ဆန်ကြိတ်ခွဲစက်သည်ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်. စပါးသည်ဆန်စက်မှတုန်ခါနေသောဖန်သားပြင်မှတဆင့်ဝင်သည်(ကျောက်ခဲတို့ကိုဖယ်ရှားခြင်း) နှင့်သံလိုက်ယူနစ်(သံမဏိအပိုင်းအစကိုဖယ်ရှားခြင်း),ပြီးတော့ Hulling အခန်းတစ်ခန်းကိုရှောက်(အဝါရောင်ခွံကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ), winnowing အခန်း, ကြိတ်ခွဲခန်း(အညိုရောင်ဖွဲဖယ်ရှားပါ, ပြီးတော့ဆန်ဖြူဖြစ်လာသည်). စပါးဆန်ကြိတ်ခွဲစက်ကစပါးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းမှလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုပြီးစီးအောင်လုပ်နိုင်တယ်, ဆန်ကြိတ်ခွဲရန် hulling.